လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများကြရာမှ အမျိုးသားက အမျိုးသမီးကို လည်ပင်း ညှစ်ကာ တုတ်ဖြင့် ရိုက်သတ်
အစွန်းမရောက်ပါစေနှင့် – အဲးခိုး
ကျနော့်သားမဟုတ်ဘူးလို့ တထစ်ချယုံကြည်တယ် – ၀င်းဇော်ထွန်းဖခင်
ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု၏ တရားခံများ ပြေး/မပြေး ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မသိ
အသတ်ခံရသူ လိင်အင်္ဂါပြောင်း အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးအတွက် ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်
HIV/AIDS အတွက်ဆိုတဲ့ Sexy Dance Party နဲ့ မီဒီယာ – အောင်ထွန်းလင်း
အကြမ်းဖက်သမားများ၏ စိန်ခေါ်မှုကို တားဆီးရေး – ထက်မြက်
အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာကို သတ်မှတ် ဖို့ စစ်တမ်းကောက်ယူမည်
ထိုင်းအလုပ်သမားများ ဓါးဖြင့်ထိုး၊ မြန်မာ အလုပ်သမား ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
တရားခံမဟုတ်ရင် ထိုင်းရဲက ဖမ်းဆီးဝံ့မှာမဟုတ်ကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
စုန်းခုနစ်ဦးအား မီးရှို့သတ်သူများကို တန်ဇန်နီးယားတွင်ဖမ်းဆီး
အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်သည်ဟု သံသယရှိသူများအမှု ရှေ့နေဖြစ်သူကိုမေးမြန်းချက်
ရှမ်းပြည်နယ် တိုက်ပွဲတွေ ရှမ်း ခေါင်းဆောင်တွေ ဝေဖန်
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးခ၀ါမှုဥပဒေအား ထပ်မံ တင်းကြပ်
ကိုဘာနီ မြို့ မကျအောင် ကန် မကာကွယ်နိုင်
အီဘိုလာကြောင့် သေဆုံးသူ လေးထောင်ကျော်ပြီ
မလယ်ကျေးရွာ မိုးဆုတောင်းဘုရား ဆင်းတုတော်သုံးဆူပျောက်ဆုံး (ပေးစာ)
မြွေကိုပြပြီး ဘုရားတည်၊ တံတားဆောက်ဖို့ဟုဆိုကာ အလှူခံမှု များလာ
မနော်ရမံ္ဓ ရင်ပြင်အား ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေရာအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်
လူသတ်မှု စွပ်စွဲခံထားရသူ မြန်မာတွေရဲ့ အမှု နောက်ဆုံး အခြေအနေ
Posted: 11 Oct 2014 07:12 AM PDT
မြင်းမူ အောက်တိုဘာ ၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြင်းမူမြို့နယ် မူးဝရွာထောင်ကျေးရွာ အဝင်လမ်း သင်္ချိုင်းကုန်း အနီး၌ ယမန်နေ့ နံနက် ၇ နာရီက အမျိုးသမီးတစ်ဦး မျက်နှာတွင် ဒဏ်ရာများဖြင့် လဲကျ သေဆုံး နေကြောင်း သတင်းအရ မြင်းမူမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကျော်စိုးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အတူ သွားရောက် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာ သေဆုံးသူမှာ မကြည်မာအောင် ၁၈ နှစ်(ဘ)ဦးမင်းအောင်
Posted: 11 Oct 2014 05:59 AM PDT
အစွန်းရောက်နိုင်ငံရေး အစွန်းထွက် ၀ါဒီသမားတွေက လူမှုအသွင်နဲ့ နိုင်ငံရေး အသွင် ကွဲပြားအောင် လုပ်ထားခဲ့ တာကြောင့် မြန်မာပြည်ဟာ စုစည်း တဲ့ နိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ နိုင်ငံသား ဘာသာရေးတွေ ပြိုကွဲနေ ကြရ . . .လူမျိုးစုငယ်တွေကို ဆန့်ကျင် အနိုင်ယူပြီး နိုင်ငံရေး အာဏာ လွှမ်းမိုး ထားနိုင်အောင် အမျိုးသားရေး ၀ါဒ ပြင်းထန် တဲ့ မြန်မာအစိုးရဟာ ဦးတည်ချက်(နိုင်ငံရေး) ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတာ ကိုတွေ့ရ . . . ~~~
Posted: 11 Oct 2014 05:58 AM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်းလို့ ခေါ်တဲ့ ခိုတာင်းကျွန်းမှာ လူသတ်မှုနဲ့ ဖမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာ လူငယ် နှစ်ယောက်အနက် တယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်းရဲ့ မိဘနှစ်ယောက်ဟာ ခိုတောင်ကျွန်းအရောက် ခရီးနှင်ဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့ကို ဒီနေ့ ရောက်နေကြပါတယ်။ သူတို့ အခုလို ခရီးနှင်နိုင်ဖို့ ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ရက်က အဓိက ကူညီခဲ့တာလို့ ကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုတင်ထူးအောင်က ပြောပါတယ်။ ကိုဝင်းဇော်ထွန်းရဲ့ မိဘ နှစ်ယောက် နို
Posted: 11 Oct 2014 02:05 AM PDT
လွန်ခဲ့သော ခြောက်နှစ်ခန့်ကပင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သော စိမ်းလဲ့ကန်သာ ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု တရားခံများ ပြေး/မပြေးကို မသိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က မသိကြောင်း အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဒုတိယ ရဲမှုးကြီးမြင့်ထွေး က ယနေ့ပြုလုပ်သည့် ရဲလုပ်ငန်းစဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ News Watch ၏ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားခဲ့သည်။ "အဲဒီအမှုကို အရေးကြီးမှုခင်းတပ်ဖွဲ့ CID ကို လွှဲအပ် ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ တရား ခံတွေ ပြေးနေသလား၊ြေ
သြစတြေလျ နိုင်ငံမှာ အသတ်ခံရတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးအတွက် ရည်စူးတဲ့ ဆုတောင်းပွဲတခု မနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားဘ၀နေ မိန်းမဘ၀ဖြစ်အောင် လိင်ပြောင်းထားတဲ့ မာယံ ပရာစက်ယို အသတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ရဲအဖွဲ့က ဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ မီဒီယာတွေက ဆိုပါတယ်။ ဆုတောင်းပွဲကို ဘရစ်စဘိန်းမြို့မှာရှိတဲ့ လိင်ပြောင်းထားသူများ အသိုက်အ၀ိုင်းက စီစဉ်တာပါ။ မာယံပရာစက်ယိုအ တွက် အောက်မေ့ဖွယ်ဖြစ်သလို
တချို့မီဒီယာတွေက သတင်းဓာတ်ပုံဆိုတာထက် Sexy Post အသားပေး ရိုက်ကူးဖော်ပြတာပါ။ ဒီတော့ အဲဒီ ဓာတ်ပုံတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ပျံ့နှံ့ကုန်သလို ဒါဟာ သတင်းဓာတ်ပုံလား ဆိုပြီး မေးခွန်း ထုတ်စရာ တွေဖြစ်လာ . . .ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ ဒီလိုတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလို့ သတင်းပေး ချင်တာလားဆိုတာ မသဲမကွဲတွေ တောင်ဖြစ် . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော သတင်းထောက်ဘ၀ အတွေ့အကြုံ)
အကြမ်းဖက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး ဘာသာရေးနွှယ်သော လူမျိုးရေး တိုက်ခိုက်မှုကို လုံးဝ မဖြစ်အောင် တားဆီးနိုင်ရမည် … လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ဘာသာရေးနွှယ်သော အဓိကရုဏ်းများ ကို ဖော်ထုတ် အရေးယူရမည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ပြတ်ပြတ် သားသား ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကို တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ် . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ အေမန်အယ်လ်ဇာဝါဟီရီက အသစ်ဖွဲ့စည်း လိုက်သော သူတို့၏
Posted: 10 Oct 2014 09:30 PM PDT
အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခ လစာ သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ အတွက် ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ၁၅ခုရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၁၀၈ ခုက လူနေမှု စရိတ်တွေကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ စစ်တမ်း ကောက်ယူ သွားဖို့ ဒီနေ့ နေပြည်တော်၊ အလုပ် သမား ၀န်ကြီး ဌာနရုံးမှာ ၀န်ကြီးတွေနဲ့ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပူးပေါင်း ပြုလုပ်တဲ့ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ရေး အမျိုးသား ကော်မတီ အစည်းအဝေးကနေ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ စစ်တမ်းမှာ မြို့နယ်အသီးသီးက
Posted: 10 Oct 2014 08:50 PM PDT
အောက်တိုဘာလ ၁၁ ဘန်ကောက်မြို့(........) မိုးပျံ ရထားလမ်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုမှာ ယမန်နေ့ညဉ့် ၉နာရီ ခွဲလောက်မှာ ထိုင်းအလုပ်သမား အချင်းချင်း စကားများ ကြပါတယ်။ အဲဒါကို အတူတူ လုပ်ကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာ အလုပ်သမား အချို့က ၀င်ရောက်ဖျန်းဖြေ ကြပါတယ်။ ထိုင်းတွေက နားလည်မှုလွဲပြီး မြန်မာ အလုပ်သမား တွေကို ဓါးတွေနဲ့ ဝိုင်းထိုးကြတယ်လို့ အလုပ် သမားတွေက ပြောပါတယ်။ ပဲခူး က အသက် ၂၅ နှ
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ဗြိတိသျှ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားစုံတွဲ သတ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချားက မနေ့က ကာကွယ် ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ ခိုထောင်းကျွန်း လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထင်ရောင်ထင်မှား ရေးသား နေတာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ သတင်းမီဒီယာတွေကို ပြောကြားလိုကြောင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေး နေသူတွေ အနေနဲ့ သူတို့အလုပ်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်စေ
စုန်းတတ်သည်ဟု ယိုးစွပ်ကာ လူ ခုနစ်ဦးအား အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်မှု ဖြင့် လူ ၂၃ ဦးအား တန်ဇန်နီးယားရဲများက ဖမ်းဆီးစွဲချက်တင် ထားကြောင်း သိရသည်။ တန်ဇန်နီးယား အနောက်ပိုင်း ကီဂိုမာဒေသရှိ မူရူဖီတီကျေးရွာတွင် တနင်္လာနေ့က အခင်းဖြစ်ခဲ့သော်လည်း တရားခံများအား ဖမ်းဆီးရမိပြီးမှသာ သတင်းထွက်ပေါ် လာခြင်းဖြစ်သည်။ အသတ်ခံရသူများအနက် ငါးဦးမှာ အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ်များဖြစ်ပြီး ကျန်နှစ် ဦးမှာ ၄၀ေ
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့မှာ နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ သံသယရှိတဲ့ လူ ၂၀ အနက် ၃ ဦးပဲ ဖြောင့်ချက် ပေးထားပေမယ့် ၀န်ခံထားတာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက ပြောပါတယ်။ တရားစီရင်နေချိန်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဒီလူတွေ ပြစ်ဒဏ်ကျုးလွန်ထားတာ ခိုင်လုံတယ်လို ထုတ်ပြောဖို့ မသင့်ဘူးလို့ အမှုမှာ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့
ရှမ်းပြည်နယ် မှာ ဖြစ်ပွားနေ တဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတ ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ကို ရှမ်း ခေါင်းဆောင်တွေ က ဝေဖန် လိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်က SNLD, SNDP စတဲ့ ရှမ်း ပါတီ တွေ နဲ့ ရှမ်း လက်နက်ကိုင် တွေ ကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မှာ စတင် ဆွေးနွေး ချိန်က SSPP/SSA နယ်မြေ မှာ နှစ်ဘက် တိုက်ပွဲ တွေ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ ထိုးစစ်တွေကို ရပ်တန့်ဖို့ လည်း သူတို့ကေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီကနေ့ ကစားမယ့် မြန်မာနဲ့ ထိုင်းတို့ရဲ့ AFC U-19 ဘောလုံး ပွဲမှာ မြန်မာ အသင်း အနိုင်ရဖို့အတွက် စိတ်ဓါတ်က အရေးကြီးတယ် လို့ မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်ဟောင်း ဦးအေးမောင်ကြီးက ပြောသလို ပရိတ်သတ် အနေနဲ့လည်း ပထမပွဲ ထက်ပိုပြီး အားပေးဖို့ သူကတိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ပွဲကြို သုံးသပ်ချက်အပြင်၊ မနေ့က ကစားသွား ခဲ့တဲ့ ပွဲအခြေအနေကို ကိုရန်နိုင်က စုစည်းတင်ပြပေးထားပါတယ်။ AFC U-19
နိုင်ငံတကာမှ အာဏာ ရှင်များနှင့် မိသား စုများ ဈေးဝယ် ပျော်ပါး လေ့ရှိရာ စင်ကာ ပူနိုင်ငံတွင် ငွေကြေး ခ၀ါ ချမှုအား တင်းကျပ်စွာ ကာကွယ်ရန် ထုတ်ပြန် ခဲ့သည့် အမိန့်သစ် အရ အဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာ နှင့် သတ္တုကုန်သည်များ သည်အောက် တိုဘာ ၁၅ မှ စတင်ကာ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀ နှင့် အထက် ငွေ ကြေးလွှဲပြောင်းမှုအား အစီရင်ခံရ မည်ဟု အစိုးရက ဆိုသည် ။ ငွေကြေး ခ၀ါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများအား ထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးေ
Posted: 10 Oct 2014 08:47 PM PDT
ကိုဘာနီ မြို့ကို အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံ တပ်တွေက အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင် ခဲ့ပြီးနောက် ကာ့ဒ် တပ်တွေရဲ့ ဌာနချုပ်ကို သိမ်းပိုက် ခဲ့ပါတယ်။ မြို့ အဝင်အထွက် နောက်ဆုံး လက်ကျန် လမ်းမကိုလည်း I-S တပ်တွေက ပိတ်ဆို့ ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဘာနီ မြို့ I-S တပ်တွေ လက်ထဲ ကျ သွားရင် ဘော့စနီးယား က ဆရီဘရီနီဆာ မြို့မှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဘော့စနီးယား မွတ်ဆလင်တွေ သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရတဲ့ အခြအနေ မျိုး ကိုဘာနီ မှာ ကျန်နေတဲ့ အရပ်သားတွေြ
ပြည်ပရောက် အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေ အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ထပ်ပြီး တိုးမြှင့်လိုက် ပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အကျိုး စီးပွားတွေ အပေါ် အကြမ်းဖက် ၀ါဒီတွေ တိုက်ခိုက်နိုင်ခြေ၊ ဆန္ဒပြ ပွဲတွေနဲ့ တခြား အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေ ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ဆက်ရှိနေသေးတဲ့အပေါ် စိုးရိမ်ရဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီး အဲဒီလို တိုးမြှင့်လိုက် တာပါ။ IS စစ်သွေးကြွတွေအပေါ် အမေရိကန်ဦးဆောင်
Posted: 10 Oct 2014 08:46 PM PDT
မြန်မာ ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုနှုန်းဟာ လာမယ့် ငါးနှစ်အတွင်း ခန့်မှန်းခြေ တနှစ်ကို ၇% ရှိမယ်လို့ ပြောလိုက် ပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော် မှာ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ ကနေ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF တို့ရဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲ နေ့မှာ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အခွန်ဝန်ကြီးဌာနြ
ကမ္ဘာမှာ အီဘိုလာ ရောဂါကူးစက် မှုကြောင့် သေဆုံးရသူ ၄၀ဝ၀ ကျော်ထဲက အားလုံး နီးပါး ဟာ ရောဂါအဆိုး ဆုံးကူးစက် ခံရတဲ့ အနောက် အာဖရိက တိုက်က ဂီနီ၊ လိုက်ဘေးရီးယား နဲ့ ဆီယာရာ လီယွန် နိုင်ငံတွေက ဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန် အထိ ရောဂါပိုး ကူးစက် ခံရသူပေါင်း ၈၄၀ဝ လောက် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အများစုဟာ အနောက် အာဖရိက နိုင်ငံတွေက ချည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ဆေးဝန်ထမ်း ၂၀ဝ ကျော်လည်း ပါဝင် ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ တုန်း ကတော့ ဒီရောဂါဟာ
Posted: 10 Oct 2014 05:06 PM PDT
အမည် ၂ ခုရှိလို့ရပေမဲ့ မွေးနေ့ ၂ ခုတော့ရှိလို့မရပါ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အပြီးမှာတော့ ကျနော်ရဲ့စာအုပ် (မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် အတု) မှာ ဗွီဇာ ကပ်စရာ စာရွက်မကျန်တော့ပါ။ ကျန်တဲ့ DVB ၀န်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့စာအုပ်တွေဟာလဲ စာရွက် ကုန်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်သက်တန်းကုန်တာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တခြားအသံလွှင့်ဌာနက ၀န်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးတွေဆီသွားပြီး
Posted: 10 Oct 2014 01:54 PM PDT
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ မလယ်ကျေးရွာတွင် ရှိသော မိုးဆုတောင်းဘုရား မှာ မလယ်ကျေးရွာနေ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများက မိုးခေါင်သော နှစ်များတွင် ဘုရားရေသပ္ပာယ်ခြင်း ဘုရား ပတ်လည် ကွင်းပြင်တွင် လွန်ဆွဲခြင်းများ အစဉ်အလာမပျက် ယုံကြည်စွာဖြင့် ပြုလုပ်သော ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ မိုးဆုတောင်း ဘုရား ပရ၀ုဏ်အတွင်းမှာ စေတီသုံးဆူရှိပါတယ်။ ၉-၁၀-၂၀၁၄ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁) ရက်နေ့ ညက မိုးဆုတောင်း ဘုရားေ
ဘုရားပွဲများ၊ ဈေးပွဲများတွင် ဘုရားတည်ရန်၊ တံတား ဆောက်ရန်ဟု ဆိုကာ မြွေပြပြီး အလှူခံ ယူမှုများ တွေ့မြင်လာရသည်။ ““ဘဘတို့က ကိုယ်လည်း စားတယ်၊ မြွေတွေကိုလည်း ကျွေးတယ်။ သာသနာလည်း ပြုတယ်။ တံတားဆောက်ပြီးပြီ။ ပဲခူးမှာ မြွေတံတားဆိုရင် လူတိုင်း သိတယ်။ ဘုရားတည်ဖို့ လိုသေးတယ်။ သာသနာပြုမယ်””ဟု မြွေဘိုးတော်ဟု ဆိုသူ ဦးမြင့်လွင်က ပြောသည်။ ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ““ပဲခူးမှာ ဘယ်မြွေတံတားမှ မရှိ ဘူး။ မကြားမိပါဘူး။
မန္တလေး အောက်တိုဘာ ၁ဝ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ နိုင်ငံသား တိုင်းသည် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာ အေးချမ်း သာယာရေး(သို့မဟုတ်) ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရား အကျိုးငှာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်အခွင့် အရေးများကို လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲ ဆောင်ရွက်ခွင့်
Posted: 10 Oct 2014 01:57 PM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဗြိတိသျှ လူမျိုး နှစ်ဉီးကို သတ်ခဲ့မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမား တွေရဲ့ အရေး အတွက် မြန်မာ အစိုးရက ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအဖွဲ့ တဖွဲ့ကို ထိုင်းကို စေလွှတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့ထဲမှာ မှုခင်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ ဥပဒေရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေလည်း ပါဝင်မယ်လို့ အဲဒီမြန်မာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အရေးကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့် က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။ အခုအခါ ဒီအမှုနဲ့
Posted: 10 Oct 2014 01:53 PM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း လိပ်ကျွန်းမှာ ဗြိတိသျှစုံတွဲ အသတ်ခံရမှုမှာ ပါဝင်တဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမား နှစ်ဦးကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မြန်မာသံရုံး အထူးအဖွဲ့ရဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို အောက်တို ဘာလ ၉ ရက်နေ့ မနေ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ တင်သွင်း ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ အစီရင်ခံစာမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပုံနဲ့ မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကို အစိုးရအနေနဲ့